EGO NA-EKWE MICHELLE
1973 (Jenụwarị 11): A mụrụ Michelle Belanger na Ravenna, Ohio.
1991–1994: Belanger dere akwụkwọ izizi nke Codex Vampire Vampire.
1991–1996: Belanger dezigharịrị akwụkwọ akụkọ ndị edemede nke ndị gothic Onyunyo.
1995: Belanger guzobere International Society of Vampires (ISV), otu maka ezigbo vampires nke si na akwụkwọ ozi pụta Onyunyo. Belanger malitere akwụkwọ akụkọ maka ndị òtù ISV a na-akpọ N'etiti abalị, nke gosipụtara nsụgharị serialized nke Codex Vampire Vampire.
1996: Otu ndị enyi guzobere ihe ga-emesị bụrụ House Kheperu. Versiondị nke Codex Vampire Vampire kesara n'okpuru aha "Codex Vampiricus."
1999: A na - akpọ aha Kheperu dị ka nke a, mgbe a kpọrọ ya ka ọ sonyere Sanguinarium.
2000: Belanger nyeere aka idegharị "Black Veil," usoro ụkpụrụ nduzi maka obodo vampire nke Fada Sebastiaan kere.
2000 (October 13): House Kheperu kwadoro ụlọ izizi mbụ ya. Nke a gosipụtara ogbako banyere ọrụ ike ma ihe dị ka mmadụ iri anọ bịara.
2002: A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke "Black Veil", na-esochi nzukọ nke ọtụtụ vampire na Endless Night Festival nke emere na New Orleans.
2004: Codex Vampire Vampire Sam Weiser, onye na-ebipụta akwụkwọ mgbaasị, bipụtara ya.
2008: Belanger pụtara n'ọtụtụ ngosipụta nke ihe ngosi netwọk A & E State Paranormal.
A mụrụ Michelle Belanger na Ravenna, Ohio, na 1973. [Foto dị n'aka nri] Ọ na-azụlite Katọlik ma bụrụ abụ n'òtù egwú nke chọọchị ya, ma ọ bụrụ na enweghị afọ ojuju maka usoro iwu nke Chọọchị Katọlik na mmachibido iwu ya na ụmụ nwanyị. Ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ ma na-enwe mmasị na mgbaasị na paranormal site na nwata. Belanger nwere nsogbu ahụ ike n'oge ọ bụ nwata n'ihi nkwarụ obi ya ma chọpụta na ahụike ya na-adịwanye mma mgbe ụfọdụ ụdị mmekọrịta ya na ndị ọzọ dị, dịka ịnyeghachi ịhịa aka n'ahụ. Mgbe ọ gụsịrị Nkwado nke Onwe-ya (1930) site na occultist Dion Fortune, ọ malitere ịtụ egwu na ọ bụ amaghị ihe ọ bụla bụ "vampire psychic," onye na-esi ike mmụọ ma ọ bụ ike dị mkpa nke ndị ọzọ iji nọgide na-adị ike. Ndị odeakwụkwọ na ndị mgbaasị ndị ọzọ nke narị afọ nke iri na itoolu na-emekarị vampires psychic dị ize ndụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ajọ omume. Ka Belanger malitere iche na onwe ya dị ka vampire, ọ gbalịsiri ike iji ihe omume a pụta. Na mahadum, ọ malitere idebe akwụkwọ edetu nke dabeere na ihe ndị ọ hụrụ n'onwe ya nke depụtara ntọala izugbe nke etu na ihe mere vampires nke ọgwụ na-eji na ike nke ndị ọzọ. Ihe odide ndia ga emesia Codex Vampire Vampire, ederede nke nyeere aka ịmepụta obodo ndị na-abanye na 1990s.
Ndị a sị na ha bụ "ezigbo vampire" malitere ịmalite na 1990s, na-adọta ndị si n'ụdị agha dịgasị iche iche gụnyere ndị na-egwuri egwu na ndị na-eme ihe nkiri, òtù ndị jọgburu onwe ha na ndị anwansi, gothic na BDSM (Ịgba mbọ na ịdọ aka ná ntị / Sadism na Masochism) subcultures, na ụdị nke ahụike zuru oke. Belanger bụ ihe dị mkpa na usoro a na ihe odide ya nyeere aka ịmepụta ọdịiche dị iche iche maka njirimara nke subculture na-apụta. Na 1991, ọ malitere idezi Onyunyo, akwụkwọ akụkọ gothic. Egwuregwu egwu egwu Vampire: The Masquerade e bipụtara na 1991 na Belanger wee ghọọ aka nyere aka ịhazi nnukwu ihe omume nke egwuregwu ahụ. Site na ụzọ ndị a, ọ na-enwe ike ịdekọrịta na ndị ọzọ a na-akpọ vampires. Na 1995, o haziri otu a maara dịka International Society of Vampires (ISV), nke gụnyere ndị na-ahụ maka vampires na ndị na-asọ oyi n'ahụ ya Onyunyo. ISV nwere akwukwo nke aka ya, N'etiti abalị, nke nwere usoro isiokwu nke sitere na Belanger na mbụ nke Codex Vampire Vampire. Na Fall nke 1996, Belanger ghọrọ akụkụ nke ndị enyi dị nso Cleveland, Ohio, nwere mmasị na vampirism na ike mmụọ. Ndị otu a chere na ha maara ibe ha n'oge gara aga mgbe ha niile nọ n'ụlọ nsọ na oge ochie. Echiche a ghọrọ akụkọ ifo nke ihe mechara pụta dị ka House Kheperu.
Otutu mmeghari vampire nke okpukpe na nke okpukpe na-amalite na 1990s, Belanger mekwara ka ya na ndi ozo na emekorita ya. Ọ rutere n'ụlọ nsọ nke Vampire, otu òtù anwansi nke kwuru na ha na-ebute mbido dị ka vampire, mana enweghị mmasị na ikike ọchịchị, nzuzo, na ịdabere na ụgwọ ndị otu dị oke ọnụ. Ya na Nna Sebastiaan nwere mmekọrịta chiri anya karị (b. 1975), onye na-anwa ịhazi subculture vampire ka ọ bụrụ nzukọ nkịtị. N'oge ahụ, a ga-akpọ nzukọ ahụ "Sanguinarium" ma bụrụkwa njikọ nke "ụlọ" dị iche iche nke vampires. Ndị a bụ “ụlọ” n'echiche nke ezi ezinụlọ, ọ bụghị ebe nkịtị. Na 1999, a kpọrọ Belanger ka ọ deba aha ya n'akwụkwọ dị ka ụlọ Sanguinarium. Banye na Sanguinarium rụgidere House Kheperu ka ọ bụrụ nzukọ nkịtị, na-anabata aha na akara. Belanger hụrụ aha “Kheperu” na Ihe omimi nke Egypt (1981) nke Lucie Lamy dere. Ọ bụ okwu Ijipt nke pụtara “ịgbanwe” ma ọ bụ “ịghọ.” Okwu a kwuru okwu banyere Belanger na ndị otu ya hiwere banyere onwe ha dị ka ndị dị iche na ndị ọrụ ha nwere ike mmụọ bụ akụkụ nke usoro mgbanwe nke gbatịrị n'oge ndụ. "Kheprian" ghọrọ nkọwasị iji kọwaa ọdịnala metụtara House Kheperu. Dị ka ihe nnọchianya ya, House Kheperu nakweere ankh Ijipt nke ejiri scarab chọọ ya mma, ihe nnọchianya nke nlọghachi. N'ime oge oyi nke afọ 1999-2000 House Kheperu guzobekwara nnabata web. Belanger gara n'ihu na Nna Fada Sebastiaan rụkọrọ ọrụ ọtụtụ afọ ọzọ wee nye aka idezigharị "The Black Veil," otu ụkpụrụ ụkpụrụ omume maka obodo vampire.
Belanger aghọwo onye ndapụta ọnụ na-ekwuru maka obodo vampire, na-apụta na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na ngalaba akụkọ. Echiche ya banyere ihe omimi, ike uche, na ịlọ ụwa, na-ekere òkè na ya na ulo akwukwo nke ulo Kheperu kwadoro, emeela ka vampire subculture di nma. Belanger edewokwa ihe ndị ọzọ metụtara anwansi, ihe omimi, na ihe ndị ọzọ, gụnyere iso ndị nwụrụ anwụ kwurịta okwu ma ọ bụ “ịchụ nta mmụọ.” Na 2008, ọ pụtara na ihe ngosi A&E State Paranormal ebe a gwara ya ka o jiri ikike ya dị ka onye na-agwọ ọrịa iji nyochaa ihe ndị e kwuru na ebubo. Belanger na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ọtụtụ ọrụ okike, gụnyere ide akwụkwọ edemede dị iche iche na ịmepụta egwú egwu nke ndị otu Nox Arcana mere. [Image na nri]
Ihe odide na echiche Belanger enwewo mmetụta n'inweta otú otu ezigbo obodo vampire si aghọta vampirism. Ndị isi vampire kachasị dị iche iche dị tupu ụlọ Kheperu dịka Ụlọ Nsọ nke Vampire na Ụdị Vampyre, otu n'ime Ụlọ Nsọ nke Set, jikọtara ya na okpukpe okpukpe Setan ma gosipụta ezigbo vampires dịka ihe mmadụ nwere ike ịghọ site na mgbaasị mmalite. N'ụzọ dị iche, Belanger egosiwo vampirism dị ka ihe dị iche iche na-enweghị atụ na-enwe mmekọahụ. Kama ịbụ "gbanwee" dị ka vampire site na nmalite, otu na-achọpụta na ha abụwo onye na-agba ọsọ ma ọ bụ onye ọrụ ume. N'ihe dị ka 1991, Belanger malitere ịkọwa okwu "edemede" iji kọwaa usoro nchọta a. Echiche ọzọ nke Belanger mara na ya bụ "mgbama," na-ezo aka n'echiche bụ na vampires nwere ike ịchọta ọnụnọ nke onye ọ bụla ma na-adọta ibe ya. Echiche a dị oké mkpa iji guzobe Ụlọ Kheperu.
Ndị otu ụlọ Kheperu na-ele onwe ha anya dịka "ndị ọrụ ike," nke pụtara na ha nwere ikike pụrụ iche ichọta, imetụta, ma mee ka ikike ike mmụọ. Ụfọdụ, ma ọ bụghị ha niile, ndị òtù na-ewere onwe ha "vampires psychic" dị ka Belanger. Belanger [Image right] na House Kheperu na-ekwu na ha na-ekwu eziokwu dịka ihe atụ, na-ele ha anya dị ka echiche dị ike karịa nkwekọrịta ma ọ bụ atụmatụ ọgụgụ isi. Ebumnuche nke ụlọ Kheperu bụ, "Chọọnụ eziokwu nke aka gị," Belanger kọwapụtara otu isiokwu dị mkpa nke ọrụ ya dị ka "akụkọ ntụrụndụ," ma ọ bụ okike akụkọ ifo. Echiche ndị Belanger banyere vampirism, ike mmụọ, na nlọghachi azụ, adịghị egosipụta nkwenye siri ike ma ọ bụ na ha esite n'echiche efu: Kama nke ahụ, a kpara ha ahụ site na ahụmahụ na-enweghị mgbagwoju anya, ntụgharị uche, "ọrụ nrọ" ma ọ bụ ihe ọmụma nke nrọ nrọ, na ncheta nke ndụ ndị gara aga . (Belanger kwuru na ọ malitere ịkọghachi ndụ ya gara aga mgbe ọ dị afọ atọ).
Mgbe ndị òtù House Kheperu tụlere ahụmahụ ha n'otu n'otu, ha bịarutere n'echiche bụ na ha nile amarala onwe ha n'ime ihe ndị mbụ e mere na oge ochie nke yiri Ijipt. Ụlọ Kheperu ekwusiri ike na mmepeanya a bụ naanị dị ka Egypt; ya mere, ka ha na-ejikarị ihe ndị Ijipt oge ochie na okwu ha eme ihe ugboro ugboro, ha anaghị ekwu na ha ga-ewughachi okpukpe okpukpe Ijipt. N'ime ndụ ndị gara aga, ha rụkọtara ọnụ na ụlọ nsọ nke nwere castes atọ: ndị ụkọchukwu na-eduga ememe, ndị dike na-agbachitere ụlọ nsọ ahụ, na ndị ndụmọdụ na-egbo mkpa mmetụta uche nke obodo. Onye ọ bụla ọ bụla nwere ọrụ pụrụ iche n'ịgba ume ike mmụọ n'oge ememe ụlọ nsọ. Na ndụ ha dị ugbu a, a na-adọtaghachi ndị mbụ nke ụlọ nsọ ka ha wee nwee ike ịnọgide na-arụ ọrụ dịka ndị ọrụ ume. Maka ndị òtù Kheperu, akụkọ a kọwara ihe mere ha ji kekọrịta njikọ mmekọrịta na ihe mere ha ji dị ka ndị dị iche na ndị ọzọ. Ndị otu ụlọ Kheperu na-amalite usoro introspection iji chọpụta nke n'ime atọ ndị ọrụ ọrụ ike ha. Nke a na-ekpebi ma ha si aghọta onwe ha na ọrụ ha n'oge ememe. Echiche a nke caste wee gbasaa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ vampire ndị ọzọ, bụ nke tinyere ụdị ihe ahụ na omenala ha.
Belanger na ndị òtù Kheperu emeela ọtụtụ ememme, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịchọta Akwụkwọ Ntugharị Vampire (2007) na Ụlọ Kheperu Archives: Akwụkwọ Ochie nke Ụlọ Kheperu (2011). A ghọtara ọtụtụ ememme Khepria gụnyere itinye aka na nhazi nke ike uche maka otu nzube. N'oge ememe agbụrụ, ndị otu nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dị iche iche dịka ha si eme. Dịka ọmụmaatụ, ndị ndụmọdụ nwere ike ịgba egwu na gburugburu iji mee ka ume dị ukwuu, ndị ụkọchukwu nwere ike ịchọta onwe ha n'etiti etiti gburugburu ebe ha nwere ike ikpokọta ma zụlite ike, ndị agha nwere ike ịkwado onwe ha na mpaghara ebe ha nwere ike " na-eche nche "megide mmetụta ndị na-ezighị ezi nke nwere ike imebi ememme ahụ.
Ọtụtụ n'ime ememe ndị a bụ ndị a na-ahụkebe na ndị na-emeghe naanị maka ndị ebido, ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọha na eze. Belanger bụ onye ụkọchukwu a kwadoro na steeti Ohio ma rụọ ọrụ agbamakwụkwọ na olili ozu Kheprian. Ụlọ Kheperu na-asọpụrụ "wheel" nke afọ "na usoro ememe asatọ nke na-edezi ihe ndị dị n'ime ala, ihe ndị equinox, na ihe dị n'etiti ha. N'ikpeazụ, Ụlọ Kheperu na-enwe "ụlọ ezumike" kwa afọ ma ọ bụ "kpọkọta" nke ghọworo ọdịnala dị mkpa. A na-emeghe ụlọ mbụ ahụ na October 13, 2000, mmadụ iri anọ nọkwa na-aga. A na-enwekarị oghere ndị a na-enwe n'ụlọ nkwari akụ ma na-adọta n'etiti ndị 125 na ndị 150 bịara. Ha na-eme nzuko izu ụka na izu ụka na ịzụlite ume ike mmụọ na ihe ndị ọzọ na-atụ aro.
Dị ka ọ na-adịkarị iche iche dị iche iche, Ụlọ Kheperu anaghị atụ egwu olu. Otu a dị obere ma enweghị ụlọ ọrụ gọọmenti, ma a na-akpọ Belanger mgbe ụfọdụ dị ka "okenye," na-egosi ọrụ ya n'ịtọ ntọala ahụ na nkwanye ùgwù nyere ya nghọta na ahụmahụ.
Ezi obodo nke vampire amalitewo mgbanwe dị ukwuu na iri afọ abụọ gara aga n'ihi mmụba na-adọrọ adọrọ na vampires na omenala a na-ewu ewu, dị nso ịnweta ịntanetị, na nlebara anya site n'aka ndị ọkachamara ahụike na inyere ndị ọkachamara aka. Mgbasawanye mgbasa ozi emeela ka ọ bụrụ na ọ bụghị nanị na ndị mmadụ na-abara ndị na-eme ka ndị mmadụ mara onwe ha asị, ma ha katọrọ ndị ọrụ na ndị na-eme nchọpụta bụ ndị gbalịrị ịkọwa azịza ha. Ndị obodo vampire na-enwekwa mkpesa na mkpesa mmega ahụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ na-agbagha ọtụtụ ìgwè vampire, gụnyere Ụlọ Kheperu. Ọnọdụ a emeela ka ụfọdụ ndị na-achọpụta onwe ha na 1990s ka ha ghara ịhapụ echiche ọha mmadụ. Taa House Kheperu na-ekwenye na ndị òtù ọhụrụ anaghị adịkarị, mana Belanger ka na-ede ma na-ekwu okwu ọha na eze banyere ọtụtụ isiokwu esoteric. [Image na nri]
Foto #1: Foto nke Michelle Belanger. Site n'ikike nke Michelle Belanger.
Image #2: Cover for album music "Ọbara nke Ndị mmụọ ozi," njikọ nke Michelle Belanger na ìgwè egwú Nox Arcana. Site n'ikike nke Michelle Belanger.
Foto #3: Michelle Belanger. Site n'ikike nke Michelle Belanger.
Foto #4: Foto nke Michelle Belanger. Site n'ikike nke Michelle Belanger.
Belanger, Michelle. 2011. Ụlọ Kheperu Archives: Akwụkwọ Ochie nke Ụlọ Kheperu. Bipute na choro.
Belanger, Michelle. 2007. Akwụkwọ Ntugharị Vampire. Bipute na choro.
Belanger, Michelle. 2004. Codex Vampire Vampire. York Beach, Maine: Redio Wheel Weiser.
Belanger, Michelle. 2017. MichelleBelanger.com. Nweta site na https://www.michellebelanger.com/ na 24 August 2017.
Belanger, Michelle, ed. 2010. Vampires na okwu nke aka ha: Anthology of Vampire Voices. Woodbury, MN: Llewellyn.
Belanger, Michelle. 2005. Agụụ Dị Nsọ: Vampire na Ụgha na Eziokwu. Bipute na choro.
Fortune, Dion. 1930. Nkwado nke Onwe-ya. London: Onye na-agba ịnyịnya & Co.
Lamy, Lucie. 1981. Ihe omimi nke Egypt. New York: Thames na Hudson.